Margarekha भोली माघ १७ गते खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै, कुन-कुन राशीको व्यक्तिले हेर्न मिल्छ ? – Margarekha
भोली माघ १७ गते खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै, कुन-कुन राशीको व्यक्तिले हेर्न मिल्छ ?
काठमाडौं– यही माघ १७ गते खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ ।बुधबार साँझ ५ बजेर ३३ मिनेट जाँदा खग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्ने भएको हो । यद्यपि, यो ग्रहण नेपालबाट भने नदेखिने खगोलविद जयन्त आचार्यले जनाएका छन् । यो ग्रहण नेपाल लगायत भारत, चीन मंगोलिया, जापान, मलेसिया, ताईवान, न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, युरोप, रसिया, अलस्का र अफ्राकाका केही देशहरुबाट समेत देख्न सकिने जनाइएको छ । साँझ ५ बजेर ५५ मिनेटमा सुरु हुने ग्रहण राती ८ बजेर ५६ मिनेटमा समाप्त हुने खगोलविद आचार्यले जनाएका छन् । खग्रास चन्द्रगहणमा चन्द्रामाको पूरै भाग छेकिएको दृेख्न सकिन्छ ।
चन्द्रगहणका बेला धार्मिकजनहरुले नदी तट, कुण्ड आदीमा गएर नुहाउने रसुद्ध हुने परम्परा रहेको छ ।
यस्ता छन् ग्रहण सम्बन्धी तत्थ्यहरु
–चन्द्रग्रहण एक्काइसौ शताव्दिमा जम्मा पचासी वटा चन्द्रग्रहणहरु पर्ने देखिन्छन् ।
–यो चन्द्रग्रहण लाइ ग्रस्तोदित चन्द्रग्रहण भनिन्छ ।
–नेपालमा चन्द्रग्रहण साझ ५ः५५ बाट देखिन्छ ।
–ग्रहणको समाप्ति राति ८ः५६ मा हुनेछ ।
–यो ग्रहण नेपाललगायत भारत,चीन मंगोलिया जापान, मलेसिया, ताइवान, न्युजिल्याण्ड, अष्टेलिया, अफ्रिका पूर्वी देशहरु, यूरोप, रसिया, तथा अलास्काबाट देख्न सकिन्छ भने व्राजिल चिली तथा पश्चिमी अफ्रिकाका मुलुकहरुमा –बसोवास गर्ने मानिसहरुले. यो ग्रहणको अनुभव लिन पाउने छैनन् । यसै नाङ्गो आखाले जो कोहिले पनि हेर्न हुने
–यसैवर्ष अर्को खग्रास चन्द्रग्रहण श्रावण ११ गते शुक्रवार राति पनि लाग्दैछ ।
–यदि तपाई धार्मिकहुनुहुन्छ र धर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ भने यही माघ सत्र गते साझ लाग्ने खग्रास चन्द्रग्रहण वृष, कन्या, तुला तथा कुम्भ राशिभएका मानिसले मात्र यो चन्द्रग्रहण हेर्नहुने बताईएको छ भने मेष, मिथुन, कर्कट, सिंह, बृश्चिक, धनु, मकर र मीन राशि भएका मानिसहरुले हेर्न नहुने बताइएको छ ।रातोपाटीबाट
१६ माघ २०७४, मंगलवार ०८:२४ प्रकाशित